I-China Ugwayi onama-flavour capsules uthandwa yintsha ngenxa yokusebenzisana, kanye nentsha yokubhema ugwayi onokunambitheka okubili. ifektri nabakhiqizi | Dayang
Ngo-2020, ukuhlaziywa kwe-Euromonitor kwalinganisela yonke imakethe ye-menthol yase-Europe ukuthi ibiza cishe i-EU € 9.7 billion (US $ 11 billion, cishe i-UK £ 8.5 billion).
Inhlolovo ye-International Tobacco Control (ITC) ngo-2016 (n=10,000 abantu abadala ababhemayo, emazweni angu-8 ase-Europe) yathola ukuthi amazwe asebenzisa i-menthol kakhulu kwakuyiNgilandi (ngaphezu kuka-12% wababhemayo) kanye nePoland (10%);
Izibalo ze-ITC zisekelwa idatha ye-Euromonitor ka-2018, ebonisa ukuthi ingxenye yemakethe ehlanganisiwe ye-menthol namaphilisi ngokuvamile yayiphakeme emazweni asenyakatho yeYurophu, nephezulu kakhulu ePoland, ngaphezu kwama-25%, ilandelwa yi-UK, ngaphezu kuka-20% ( bheka Umfanekiso 2).50 Izabelo ezilinganiselwe zikagwayi onephunga elimnandi i-menthol uma kuqhathaniswa nalawo anamaphilisi (menthol nokunye ukunambitheka) nawo ayehluka; kuyilapho isabelo semakethe samakhepsuli sidlula isabelo sikagwayi onephunga elimnandi e-menthol engxenyeni yamazwe e-EU, i-Menthol kanye nesabelo semakethe yama-capsule sithande ukuba phezulu emazweni aseYurophu ngaphandle kwe-EU.
Ugwayi we-Menthol wakha isilinganiso esilinganiselwa ku-21% emakethe yase-UK. Izibalo zika-2018 ze-Office for National Statistics (ONS) zibonisa ukuthi kwakukhona ababhemayo abayizigidi ezingu-7.2 e-UK; ngokusekelwe kudatha yenhlolovo ye-ITC yango-2016 (eningiliziwe ngenhla) engalingana nababhemayo abacishe babe ngu-900,000 abavame ukubhema ugwayi we-menthol. Ngokwedatha yocwaningo lwemakethe isibalo sasiphezulu kakhulu ngo-2018, cishe ezigidini ezingu-1.3, nakuba lokhu kuzobandakanya labo ababhema ezinye izinhlobo zikagwayi (isb. standard non-flavoured) kanye ne-menthol.
Ukusatshalaliswa okukhulu nokumaketha kwe-menthol akuzange kuqale kwaze kwaba ngawo-1960 nakuba igunya lobunikazi lase-US lokunambitha i-menthol lanikezwa ngawo-1920. Ngo-2007 ukwakheka okusha kokwengeza ukunambitheka kwavela emakethe yase-Japan osekujwayelekile kwenye indawo, okuvamise ukumakethwa 'njenge-crushball', lapho ukunambitheka kwengezwa ngokuchobozwa kwekhepsuli yepulasitiki encane esihlungini. Ugwayi onama-flavour capsules uthandwa ngabantu abasha ngenxa yokusebenzisana, kanye nentsha yokubhema ugwayi onama-flavour amabili. Ezinye izimakethe, njenge-UK.